Markabkiina Burcad badeed ee sugaya Burcad Burcad ah by Rovio | Androidsis
Hagaag waa inay taajir noqdaan dhammaan kuwa qaata ciyaar nuucaan ah tan iyo maalin kasta oo dhaafta mid cusub ayaa soo muuqata. Maaha taas tan waxaan ku dhaliilayaa noocaan, laakiin waa Cajiib ah tirada badan ee Ciyaaraha Qabyaaladda-qaabeeyaha fiidiyoowga ah waxa aan hayno gudaha Dukaanka Ciyaaraha.
Dhab ahaan Rovio, maanta wuxuu noo keenayaa mid cusub oo leh a mawduuca burcad-badeednimada iyo in uu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan kuwa kale, inkasta oo aakhirka arrimuhu sidii hore uun sii ahaanayaan: dhis saldhiggaaga, weerar ku qaado ciyaartoy kale oo aad u isticmaashid dhagaxyo si loo badbaadiyo waqtiga ay ciyaartoy kale u qaataan inay noqdaan kuwa ugu awoodda badan. Burcad badeeda waa sharad Rovio, aan aragno waxa naga yaabin kara.
1 Ciyaar fiidiyow ah oo lagu dhisayo saldhiggaaga… Wanaagsan!
2 Sahaminta badda koonfureed ee galleon-kaaga
Ciyaar fiidiyow ah oo lagu dhisayo saldhiggaaga… Wanaagsan!
Ama maya, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan horeyba uga yara daalnay ciyaar kale oo noocan ahLaakiin aan horay u sii socono, laga yaabee burcad badeedda inay wax naga yaabiyaan. Waxaa laga yaabaa in mawduuca burcad-badeednimada nalagu qancinayo markabkaas burcad-badeednimada ah oo aan ku khasbanaan doonno inaan dayactirno si aan u dhoofinno baddaha ku xeeran sidaasna aan ku ogaanno khasnado badan oo aan ku afduubanno haweenka wanaagsan iyo xamarka aan ka heli doonno daraasiin dekedo ah.
Sida inta badan ciyaaraha kale ee qaabkan Waxaan dhisi doonaa saldhigeena, waxaan dhismeynaa dhismayaasha, waxaan weerari doonnaa cadaawayaasha, waxaan isku dayi doonaa inaan burburinno saldhigyada ciyaartoyda kale oo waxaan ka abuuri karnaa qabiil ka mid noqda kuwa ugu cabsida badan ee Badda Koofureed.
Sahaminta badda koonfureed ee galleon-kaaga
Mid ka mid ah qodobbada ay budhcad-badeedda dhaca ka taagan tahay ayaa ah haysato markab burcad-badeed oo kuu gaar ah oo aad ku sahamiso badaha ku xeeran. Waxaan soo ogaan doonnaa fagaarayaal cusub oo leh jasiirado cusub ama cadaw sida aan khariidada ugu sahaminno aagga nagu wareegsan. Muuqaal ka duwanaan kara cinwaannada kale sida Isku dhaca Qabiilooyinka ama Boom Beach.
Farsamo ahaan waa mid aad u fiican waxayna toos ugu socotaa inaanan waqtigeenna ku lumin waxyaabo nacas ah, wax la mahadiyey oo xaqiijinaya inaan si dhakhso leh u yeelan doonno wejigii koowaad ee jasiiradeenna oo mar horeba la dhisay. Waxaa loo maleynayaa in aan horeyba khubaro ugu nahay noocyada noocan ah Rovio-na wuu ogyahay, marka laga soo tago xaqiiqda ah in ay abuureen hal abuureyaasha shimbiraha Angry qudhooda, sidaas darteed rabitaankooda ayaa geliyay bilaabida ciyaar lagu wajihi karo waji ka waji ka dhanka ah Isku dhaca qabiilooyinka, boqorka ku wareegsan qaybahaas.
Burcad badeedda ayaa leh faahfaahin fiican sida habeenka iyo distills xirfadaha farsamo weyn waxa ay yihiin jilayaasha, animations dagaal iyo fikradda ah in la helo jasiirad ay baddu ku wareegsan tahay taas oo lagu ballaadhinayo dhulka leh dhismooyinka kala duwan. Haddii sabab kasta ha noqotee aad uga daashay ciyaaraha kale ee sidaas oo kale ah, laga yaabee inay tahay waqtigii la isku dayi lahaa oo la isku deyi lahaa inuu noqdo burcad-badeedda ugu naxariis darrada badan.
Burcad badeeda dhaca
Mid kale sida Isku dhaca Qabiilooyinka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Burcad Badeed, Rovio cusub oo la tartamaysa Dagaalkii Qabiilooyinka
Waxay ku jirtaa qaabkii loo yaqaan 'Clash of Clans' laakiin anigu shakhsiyan waan u jeclahay si ka wanaagsan mawduuca Budhcad-badeedda, oo wuxuu leeyahay muuqaallo aad u fiican oo 3D ah!
Barnaamijyada casho ee far-farida; Maanta Cunnooyinka Grill Free